हाईप्रोफाइलका ‘बिजुली कार’ – श्वेतपत्र
आगामी दशकमा डिजेल र पेट्रोल गाडी विस्तारै विस्तापित हुँदै जानेछन् । र, इलेक्ट्रिक कारले उपभोक्ताको मन जित्नेछन् ।
काठमाडौं । दशैंअघि विश्वकै प्रिमियम लक्जरी ब्रान्ड अउडीका तीनवटा गाडी नेपाल भित्रिए । विद्युतीय भर्सनमा भित्रिएको अउडीले नेपाली अटो बजार तरंगित बनायो । विश्वकै पारखीहरुको ड्रिम्स कार अउडी पहिलो पटक नेपाल भित्रिँदा चर्चा चल्नु स्वभाविक पनि थियो ।
जर्मनीको प्रिमियम ब्रान्ड अउडीको विद्युतीय कार ‘इ–ट्रोन’ नेपाल भित्रिएका थिए ।
नेपालमा आउडी चढ्ने व्यक्ति को होलान ? कस्ले मगायो त विश्वकै प्रिमियम कार ? विभिन्न अड्कलबाजी काटियो । यत्तिकैमा युवा उद्यमी सौरभ ज्योतिले अउडीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिए । बाईका सौखिन सौरभले बुवा पद्य ज्योतिका लागि अउडी कार किनिदिएका रहेछन् । उनीसँग विभिन्न ब्रान्डका बाईकको कलेक्सन नै छ ।
अर्को अउडी जगदम्बाका विष्णु न्यौपाने चढ्छन् ।
नेपाल भित्रिएको अउडीको मूल्य १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रिन्सा मोटर्सले अउडीका तीनवटा विद्युतीय कार नेपाल भित्र्याएको थियो । अझै तीनवटा अउडी बीरगन्जस्थित सिर्सिया बन्दरगाहमा अड्किएका छन् । बीरगञ्ज भन्सार यार्डमा विद्युतीय कार टेस्ला र रेञ्जरोभर पनि थन्किएका छन् । टेस्ला विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने विश्वकै ठूलो कम्पनी हो ।
विद्युतीय कार चढ्नेहरुको पहिलो रोजाई टेस्ला हुन्छ ।
नेपालमा गाडी भित्र्याउँदा विभिन्न शिर्षकमा मोटो रकम कर तिर्नुपर्छ । प्रिमियम विलासी कारको झन्डै ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । हेभी कारको रोड ट्याक्स, वार्षिक नविकरण दस्तुर पनि उत्तिकै चर्को छ ।
तर, सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्न सबै खाले ब्रान्ड/रेञ्जका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएको छ । विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरे पुग्छ । जबकी पेट्रेलियम गाडीमा साढे दुई सय प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्दैन । बैंकले पनि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्छन् ।
सरकारको यही नीति (विभिन्न किसिमको कर छुट) को फाइदा उठाउँदै विश्वका प्रिमियम ब्रान्डमा हुइँकिने रहर पालेका कारका सौखिनहरुले धमाधम विद्युतीय भर्सन मगाइरहेका छन् । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने विलासी कार नेपाल ल्याएर चढ्न निकै नै महंगो पर्न जान्छ ।
नेपालमा तीनवटा विद्युतीय अउडी भित्रिनु, टेस्ला, रेञ्जरोभर लगायत एक दर्जन विद्युतीय कार भन्सारसम्म आइपुग्नु यही कारण हो ।
नेपालमा एकाध प्रिमियम ब्रान्डका विद्युतीय कार भित्रिए पनि मध्यम रेञ्जका विद्युतीय कारले बजार तताउन थालिसकेका छन् । किया, हुन्डाई, महिन्द्राका धेरै गाडी सडकमा कुदेको देख्न सकिन्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कियाको विद्युतीय कार सोल चढ्छन् । उनले ५८/५८ लाख रुपैयाँ तिरेर दुईवटा किया सोल किनेका छन् ।
व्यवसायी शेखर गोल्छासँग कियाको विद्युतीय कार ‘सोल’ छ । उनका छोरा अभिमन्यू हुन्डाईको ‘कोना’ चढ्छन् । गोल्छा परिवारकै सरद गोल्छाले कियाको निरो किनेका छन् । गोल्छा परिवारमै विद्युतीय कार आधा दर्जन पुग्न थालिसके ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल कियाको सोलमा हुइँकिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । उनी कियाको विद्युतीय गाडी सोलको पहिलो ग्राहक पनि हुन् ।
बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेस कोइराला र बरिष्ठ दाँतरोग विशेषज्ञ निल पान्डेले हालसालै कियाको निरो किनेका छन् । अर्का बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला महिन्द्राको ईटुओ चढ्छन् ।
नेपाल विद्युतीय कार किन उपयुक्त ?
नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक हो । प्रशस्त विद्युत उत्पादन हुँदैछ । विद्युतीय कारको प्रयोग बढ्दा स्वदेशी विद्युत खपत हुन्छ । महंगो मूल्यको पेट्रोलियम आयात घट्छ ।
विद्युतीय कार वातावरणमैत्री हुन्छ । यो कारले धुवाँ र आवाज निकाल्दैन । प्रदूषण घटाउन मद्दत पुग्छ ।
यी कार पावरफुल पनि छन् । खाल्डाखुल्डी र उकालो कच्ची सडकमा पनि सजिलै तान्छ । गाडीले १० सेकेन्डमै शून्यबाट १०० किमिको गति समात्न सक्छ ।
पछिल्ला समय एक पटक ब्याट्री फुल चार्ज हुँदा साढे ४ सय किमीसम्म दौडिने कार आइसकेका छन् । लामो दुरीको यात्रा पनि सम्भव हुँदैछ । त्यसमाथि सरकार र निकी कम्पनी आफैले राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्दैछन् ।
यो गाडीको सञ्चालन खर्च निकै कम हुन्छ । प्रतिकिलोमिटर यात्रा डेढ दुई रुपैयाँमै गर्न सकिन्छ । सर्भिसिङका लागि महंगा पार्टपुर्जा किनिरहन पर्दैन । महंगो पेट्रोल किन्न पर्दैन । मासिक सर्भिसिङ पनि गरिरहन पर्दैन । नविकरण, सडक दस्तुर पनि लाग्दैन । ठूलो रकम बचत हुन्छ ।
यसमा विलासी गाडीमा सवारी गरेको अनुभूति हुन्छ । ब्याट्रीबाट चल्ने हुनाले भाइब्रेसन आउँदैन ।
यो कार कुदाउँदा गियर बदलिरहने झन्झट हुँदैन । चलाउन पनि निकै सजिलो हुन्छ ।
पाँचतारे अन्नपूर्ण होटलकी मालिक सिर्जना राणा कियाको सोल चढ्छिन् । औषधी उद्योगी एवं नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा कियाको निरो चढ्छन् । चर्चित निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेसँग पनि महिन्द्राको विद्युतीय कार छ । मर्कन्टाइलका सञ्जिवराज भण्डारी कियाको निरो चढ्छन भने ओलिज स्टोरका लोकेश ओली महिन्द्राको ईटुओ चढ्छन् । व्यवसायिक घराना खेतान ग्रुपमा तीनवटा कियाको निरो भित्रिसकेका छन् ।
बरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कियाको सोल किनेका छन् । राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र कुन्द दिक्षित महिन्द्राको ईटुओ चढ्छन् । चर्चित भिजे सुरजसिंह ठकुरीले हुन्डाईको आयोनिक किनेका छन् । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले पनि महिन्द्राको ईटुओ चढ्छिन् ।
नेपालमा करीव आधा दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कार हुइँकिन्छन् । आउडी, महिन्द्रा, किया, हुन्डाई, पोजो, बीवाईडी । सुरुमा भित्रिएको महिन्द्रा ईभा हो । सुधारिएर पछि महिन्द्रा ईटुओ आयो । पछिल्लो समय विद्युतीय कार भित्र्याउने पोजो हो । रेञ्जरोभर र टेस्लाको कार बीरगञ्ज भन्सारमा अड्किाएका छन् । टाटा, रेनो र एमजीले पनि विद्युतीय भर्सन भित्र्याउँदै छन् ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा लोकप्रिय कियाको निरो र हुन्डाईको कोना हुन् । यसअघि महिन्द्रा ईटुओले एकछत्र राज गरिरहेको थियो । सस्तो विद्युतीय कारमा ईटुओ अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ ।
– अधिकतम स्पिड : १५३ किमी
– ब्याट्री : ३९.२ किलोवाट
– नर्मल चार्जबाट : ६ घण्टा
– फास्ट चार्जरबाट : ४५ मिनेट
– माइलेज : ३०० किमी
– एयरब्याग : ६ वटा
– मूल्य : ५५ लाख ९६ हजार
मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सरकार आफै पनि अग्रसर देखिन्छ । भन्सार दर १० प्रतिशतमात्र तोकेको छ । जबकी पेट्रोलियम गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ । विद्युतिय गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । पेट्रोलियम गाडीमा १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्छ । विद्युतीय गाडीको भ्याटमात्र तिरे पुग्छ ।
विद्युतीय कारको सञ्चालन खर्च पनि निकै कम छ । एक पटक लगानी गरेपछि खर्च नगन्य नै हुन्छ । मानौं, पेटोलियम कारमा प्रतिकिलोमिटर यात्रामा १५ रुपैयाँ खर्च हुँदा विद्युतीय कारमा बढीमा २ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अहिले एक पटक फुलचार्ज हुँदा साढे ४ सय किलोमिटरसम्म कुद्ने कार बजारमा आइसकेका छन् ।
विद्युतीय कारको वार्षिक नविकरण दस्तुर, मासिक सर्भिसिङ, महंगो पेट्रोल, पार्टपुर्जा लगायतमा भइरहने खर्च पनि कटौती हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । जबकी पेट्रोलियम सवारीमा ५० प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युतीय कार विवाईडी किनेको थियो । आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसको अगुवाई गरेका थिए । पछि योजना आयोगलाई पछ्याउँदै अरु सरकारी निकायले पनि विद्युतीय कार किन्न थाले । अहिले वाग्ले आयोगको उपाध्यक्ष त छैनन, तर बाहिर हुँदा पनि उनले विद्युतीय कार किनेर चढिरहेका छन् ।
योजना आयोगले विद्युतीय कार किनेपछि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युतीय कार बीवाईडी नै किने । राष्ट्रपति कार्यालयले पनि विद्युतीय कार खरिद ग¥यो । नैपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सेतो कलरको विद्युतीय कार बीवाईडी चढ्छन् ।
विद्युतीय कार बिक्रेताका अनुसार डाक्टर, ब्युरोक्र्याट, इञ्जिनियर, वातावरणमा काम गर्ने, एनजीओ, आईएनजी, विद्धान वर्ग, व्यवसायी बर्ग विद्युती कार चढ्न थालेका छन् । अझै पनि विद्युतीय कार घरमा पहिले नै कार हुनेले धेरै किन्छन् । विद्युतीय कार लामो दुरीमा लैजान नमिल्ने हुनाले ग्राहक पेट्रोलियम गाडीमै बढी आकर्षित रहेको बिक्रेता बताउँछन् ।
– मूल्य ६६ लाख ९० हजार
– अधिकतम स्पिड १६७ किमी
– ६४ किलोवाटको ब्याट्री, लिथियम पोलिमर
– अगाडि र पछाडि डिस्क ब्रेक
– सुरक्षाका लागि सात एयरब्याग
– ६ आकर्षक कलरमा उपलब्ध
– फुल चार्ज ब्याट्रीमा ४५५ किमी माइलेज
– फुल चार्ज हुन ५० युनिट विद्युत् खपत
– प्रतिकिमिय यात्रा १ रुपैयाँ ५० पैसा
– अगाडि र पछाडि पार्किङ सेन्सर
– थ्री ड्राइभ मोड (नर्मल, इको र स्पोर्टस)
– ७.८ सेकेन्डमा शून्यबाट १०० किमि स्पिड लिन्छ
अब यो समस्या पनि समधान हुँदैछ । मुलुकमा लोडसेडिङ हटेर फालाफाल बिजुली उत्पादन हुँदैछ । रातको समयमा सस्तोमै बिजुली पाउन सकिने अवस्था छ । निजी गाडी बिक्रेतामात्र होइन, सरकार पनि काठमाडौं उपत्यका र राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन बनाउन कस्सिएर लागेका छन् । कियाले कुरिनटार, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, बिराटनगर लगायत ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखिसकेको छ । अन्यत्र पनि राख्दैछ । हुन्डाईले पनि चार्जिङ स्टेसन राख्दैछ । यसले भविष्यमा विद्युतीय कारको आकर्षण अझ बढ्दै जाने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म कुन्द दिक्षितले तीनवटा महिन्द्रा ईभी परिवर्तन गरिसकेका छन् । नेपालमा विद्युतीय कार चढ्ने उनी पहिलो पुस्ता हुन् । उनको ईभीको प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान रहेको महिन्द्रा कम्पनी बताउँछ ।
मिस इको नेपाल रोनाली अमात्य, डा. विश्वबन्धु शर्मा, डा. सुधा बस्नेत, बिजनेश म्यान सञ्जय शाह, डा. भुपेन्द्र देवकोटा, वातावरणविद् डा. गणेश गुरुङ, फिल्म डाइरेक्टर छिरिङ शेर्पा, अर्की मिस नेपाल पुनम रिसाल, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल पनि महिन्द्रा ईटुओ चढ्छन् ।
सफा ट्याम्पोका अभियान्ता बिजयमान शैरचन कियाको निरो चढ्छन् ।
अहिले हुन्डाई र कियाले बजारको मागअनुसार विद्युतीय गाडी सप्लाई गर्न सकिरहेका छैनन् । बजारमा विद्युतीय कारको माग ज्यादा छ । कम्पनीले सप्लाई गर्न भ्याइरहेको छैन । किया निरोको बजार मूल्य करीव ६६ लाख छ । हुन्डाई कोनाको करीव ५६ लाख छ ।
किया गाडी बिक्रेता सुहृद घिमिरे भन्छन्, ‘बुकिङ टन्नै छ, हामीले नै गाडी हस्तान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । गाडी नभएकैले ग्राहकले कलरमा पनि कम्परमाइज गरिरहेका छन् । चाहेको कलर लिन खोजेमा अझ धेरै कुनुपर्ने हुन सक्छ । यदि कम्पनीले पर्याप्त गाडी उपलब्ध गराएमा नेपालमा विद्युतीय कारका ग्राहक खोज्दै हिँड्न पर्दैन ।’
नेपालमा विद्युतीय कार र स्कुटर चल्न थालेको डेढ दशक नाघिसक्यो । सन् २००७ मा पहिलो पटक विद्युतीय कार रेभा भित्रिएको थियो । भारतीय कम्पनी महिन्द्राले रेभा किनेपछि अहिले ‘महिन्द्रा ईटुओ’ नामबाट विद्युतीय कारहरु आइरहेका छन् । महिन्द्रा ईटुओ धेरै पटक अपग्रेड भइसकेको छ
१४ माघ २०७६, मंगलवार ०९:४७ मा प्रकाशित
Related Topics:electric carविद्युतीय कार